गायक क्षेत्रीले आफ्नो जात किन परिवर्तन गरे ? हेर्नुस भिडियो सहित - Purbeli News
गायक क्षेत्रीले आफ्नो जात किन परिवर्तन गरे ? हेर्नुस भिडियो सहित
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०३, २०७५ समय: १८:२४:३७
काठमाडौ/ २१ औ सताब्दिको अन्त्य तिरै आइपुग्दा सम्म पनि जातिय विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन । सानो जात भनिएका हरुलाइ ठुला जात भनौदाले हेपिरहेका छन । यो विभेद विरुद्द विभिन्न तवरबाट आवाज उठिरहेको छ । यसरी आवाज उठिरहदा यसै विषयलाइ लिएर गीत संगीत बनिरहेका छ । त्यस्तै अर्को एक मन छुने गीत सार्वजनिक भएको छ ।
स्वरुप क्षत्रीको शब्द संगीत रहेको ‘सायदै’बोलको गीतमा सि.डि विजय अधिकारिले आफ्नो सुमधुर स्वर भरेका छन । गीतलाइ दिपक लामाले एरेन्ज गरेका छन । स्वरुप क्षत्री, आदित्य ठकुरी, सपना सिवाकोटी, कन्या मगर, सन्देश थापा, किरण बानियाले अभिनय गरेको गीतको भिडियो मन छुने छ । स्वरुप क्षत्रीले कथा, सम्बाद र निर्देशन गरेक्क भिडियोलाइ सन्देश थापाले खिचेका हुन । भिडियोलाइ महेन्द्र पराजुलिको सम्पादन रहेको छ । हेर्नुस् भिडियो ।
यस गीतले कभर गीत प्रतियोगिता पनि राखेको छ । प्रतियोगितामा भाग लिने अन्तिम मिति जेठ १५ सम्म रहेको छ अर्थात इच्छुकले आफ्नो गीत जेठ १५ सम्ममा स्वरुप क्षत्री क्रीयसनको अफिसियल जिमेल [email protected] मा पठाउनु पर्ने छ । विजेताले आकर्षक गिफ्ट र एक गीत फ्रीमा रेकर्डिङ गराउन पाउने छ । प्रतियोगिले पठाएको गीतलाइ युटुबमा राखिने छ र युटुबको भ्युज र जज को मतबाट विजेता घोषणा गरिने छ । लिरिकल ट्र्याक ओएसआर डिजिटलको युट्युब च्यानलमा उपलब्ध हुनेछ ।